Chitoro chitsva cheApple chichavhura zvekare masuo ayo vhiki rino | IPhone nhau
New Apple Stores ichavhura zvakare masuo avo vhiki rino
Sezvo vhiki dzinoenda, iyo Apple Stores iyo yakavharwa kubvira pakati paKurume, zvishoma nezvishoma kudzokera kune zvakajairwa, kunyangwe vamwe vacho (avo vari muUnited States) vakamanikidzwa kuvhara masuo avo nekuda kwezviitiko zvakakonzerwa nerufu rwaGeorge Floyd pamaoko emapurisa.
Zvizhinji zvezvitoro zvakavhurwa neApple muEurope (kunze kweFrance neUnited Kingdom), zvakavhurwa, kusanganisira iya yeSpain. Zvitoro zvinotevera zvine Apple pasi rese zvichavhurwa ndezve muUnited Arab Emirates, zvichitevera zvitsva protocol kuti ugare wakachengeteka kubva ku coronavirus.
Sekureva kwe Khaleej Times, Chitoro cheApple chiri muDubai, Emirates neYas nzvimbo dzekutengesera dzinozovhura madhoo avo mangwana, Chikumi 8. Kufanana nezvose zvimwe zvitoro zvakatovhura mikova mushure mekupararira kwedenda, izvi zvichaita pane yakaderedzwa purogiramu, kubva 11 mangwanani kusvika 7:30 masikati uye vachatarisa kune vatengi, vachikoka vatengi vashandisi kune izvo ramba uchitenga kuburikidza neApple Chitoro pamhepo.
Vatengi vese vanoshanyira zvitoro vanofanirwa kupindura akateedzana mibvunzo nezve hutano hwavo, kupfeka chifukidzo, kubvumira tembiricha yavo kuyerwa neasinga pindire thermometer uye kupfeka magirovhosi. Uye zvakare, kupinda kwevanhu kwakaderedzwa zvakanyanya kuti vakwanise chengetedza chinhambwe chakachengeteka kudzivirira njodzi dzinogona kutapukirwa.
Kana aya maApple Stores akavhurwa mangwana, huwandu hwezvitoro zvinovhurwa kunze kweUnited States huchakwira kusvika 145 ye239 iyo iyo Cupertino-based kambani yakaparadzira kunze kweUnited States. MuUnited States, 136 ye271 Apple Stores parizvino yakavhurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » New Apple Stores ichavhura zvakare masuo avo vhiki rino
Uine Apple Card unogona kutenga ako Apple zvishandiso muzvikamu pasina mubereko
Apple Kuona kuwira kwekutsvaga kunoponesa hupenyu zvakare